Xayeysiinta Shiinaha 3d waxay keentay warqad akrilik ah oo loogu talagalay soo saarayaasha calaamadaha dukaanleyda iyo alaableyda | Zhengcheng
Xayeysiinta 3d waxay keentay warqad akrilik ah oo loogu talagalay calaamadaha dukaanka
Midabka astaanta ayaa loo habeyn karaa. Waraaqaha acrylic-ka waxaa laga sameeyay warqad akrilik ah oo la soo waariday, taas oo adkaysi u leh beddelidda oo aan sahlaneyn in la libdho. Qalabka khariidadda caadiga ah ee khariidadda, oo leh qalab iftiin sare leh oo iftiin leh.
Magaca badeecada: Led acrylic letter
Waxyaabaha jir ah: Xaashida looxa lagu soo dhoofiyo
Dammaanad: 2 sano
Faa'iidooyinka waraaqaha akrilik ee la hoggaamiyay
Waraaqaha loo yaqaan 'LED acrylic' waa mid ka mid ah calaamadaha dibedda ee ugu caansan maanta. Waxay si cad u muujineysaa magaca saxiixa, taas oo ka dhigeysa mid cad marka la jaleeco. Muuqaal astaan ​​cad, qurux badan oo dhalaalaya ayaa fududahay in la xasuusto. Waa mid ka mid ah astaamaha qaab dhismeedka bannaanka ee aadka loo isticmaalo.
Dukaamada qaar baa ka miisaan yar, marka waxaad u adeegsan kartaa xarfaha loo yaqaan 'acrylic led' calaamadaha, kuwaas oo aad u fiican oo qurux badan. Isla mar ahaantaana, rakibidu waa mid fudud oo habboon.
Xarfaha loo yaqaan 'acrylic led' looma isticmaali karo oo keliya soo saarista calaamadaha, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qurxin gudaha ah si loo kordhiyo saameynta astaanta.
Q1.Ma haysan karaa amar muunad ah?
Jawaab: Haa, waxaan soo dhaweynaynaa amarka muunadda si loo hubiyo loona tijaabiyo tayada wax soo saarka.
Q2.Ma tahay warshad / soo saare ama shirkad ganacsi?
Jawaab: Waxaan nahay soo saare isku dhafan R&D, naqshadeynta iyo soo saarista. Waxaan leenahay warshad gaar ah.
Q3.Sidee u xirxiraysaa alaabada?
Jawaab: Gudaha gudihiisa waa sanduuqa xumbada laga ilaaliyo iyo kartoon gooni ah, banaankana waa baakado alwaax adag leh.
Q4.Ma haysto wax sawiro ah, ma ii qaabeyn kartaa aniga?
Jawaab: Haa, nashqadeeyayaasheena ayaa kuu naqshadeyn doona adiga oo u eegaya saameynta aad rabto.
Q5. Sidee loo helaa qiimaha badeecadaha?
Jawaab: Waxaad u soo diri kartaa macluumaadka badeecadaha aad rabto inaad ogaato emaylkeena ama la xiriir maamulaha ganacsiga internetka, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa qiimaha ku habboon sida ugu dhakhsaha badan.
Hore: 2021 Calaamadaha Iftiiminta Tayada Wanaagsan - Calaamadda sanduuqa nalka xayeysiinta - Zhengcheng
Xiga: Sanduuqa nalka miiska ee miiska dalabka makhaayadda
Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya, Saxeex Farmashiyaha, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Calaamadaha Xayeysiinta, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah,